Fatịlaịza n'ihi ogwu na ubi - China Qingdao King Good New Materials
Mgbe ọ na-abịa na-eto eto na gị onwe gị ike nri, ọ bụ ihe kacha mma iji eke, organic nri. M maara organic ugbo nwere ike uda egwu, na ndị na-achọkarị iru maka chemical stof n'ihi na o yiri mfe. Ma na-arụ ọrụ na uwa, na iji organic fatịlaịza n'ogige bụghị naanị mma maka anyị, ọ n'ezie na-arụ ọrụ mma.
Ọ bụghị ike na-ewuli elu ọgaranya, organic ala gị n'ubi. Otu ụzọ dị mfe iji na-eme ya bụ megharịa gị ala na compost ndị ọzọ organic ihe na a mgbe niile. Echegbula onwe gị, ịmegharị ala-adịghị ga-enwe ike. Iji megharịa ala gị ka ị nwere ike iji eke, organic fatịlaịza n'ihi ogwu na ubi - ka compost ị na-eme onwe gị ma ọ bụ zụta ke ufọkurua, ma ọ bụ i nwere ike ịzụta ngwaahịa dị ka irighiri oge ọgbụgba, composted nsị anụ, ma ọ bụ azụmahịa organic ubi nri. Ị pụrụ ọbụna ịzụta organic ogwu ubi fatịlaịza ka Healthy Too organic ogwu fatịlaịza ma ọ bụ Sustane niile eke osisi nri, na-ekwu banyere mfe!
Njikọ Post: 6 ihe ọhụrụ ọ bụla akwukwo nri ubi kwesịrị ịma
E nwere tọn ebube nhọrọ maka organic ubi fatịlaịza na ahịa ụbọchị ndị a, ha bụ ibu mfe iji. Ị nwere ike tinye organic ngwa ngwa ntọhapụ fatịlaịza n'ime ogige tupu akuku, ma ọ bụ fesa ya gburugburu isi gị herbs na ọkọ ya n'ime ala. Ọ bụla, gị herbs ga-erite uru site kwukwara oriri na-edozi.
Post oge: Mar-05-2018